Abriil | 2010 | WEEJIDOW
Archive for Abriil, 2010
War Deg Deg ah: Xoogaga Islamaiyiinta oo weerar culus ku qaaday guriga Prof. Maxamed Faarax Jimcaale waxii alaabtaylayna ka qaatay
Abriil 30, 2010
Weerar xoogan ayaa waxaa lagu qaaday guriga uu lahaa Prof. Maxamed Faarax Jimcaale oo ku yaalo deegaanka ka soo horjeedka Xarunta saraakiisha ee Shrikoolaha halkaa oo ku yiilay gurigiisa
Guriga ayaa waxaa weeraray xoogaga Islamaiyiinta ka arimiyo halkaa iyadoona gurigaasi ay ka qateen sida la sheegay hub iyo baabuur dagaal waxaana la sheegay in uusan xiligaa joogin guriga Maxamed Faarax Jimacaale xiliga la weeraraayey.
Maxamed Faarax Jimacaale ayaa noo xaqiijiyey weerarkaasi isagoo ku sugan Muqdisho waxuuna sheegay in uu ka maqnaa xiliga uu dhacaayey weerarka qorsheysan isagoona qirtay in wax laga qaatay
Prof. Maxamed Faarax Jimcaale ayaa sheegay dhamaan in la qaatay dhamaan waxii gurigiisa yaalay isagoona ku gaabsaday xoogaga islamaiyiinta.
Dowladda Mareykanka oo hub cusub siisay dowladda KMG Soomaaliya
Warar aynu ka helnay ilo ku dhow dhow dowladda KMG Soomaaliya ayaa sheegaya in hub cusub uu Mareykanku ugu deeqay dowladda KMG Soomaaliya.
Hubkaas oo ay ka mid yihiin gantaalo kala duwan oo qaarkood ay madaafiic ka dhacdo, hubka fudud iyo rasaastooda iyo saanadao kale oo ciidan ayay wararku sheegayaan in dhinaca ururka midowga Afrika loo soo marsiiyey looguna soo dhiibay ciidamada AMISOM.
Hubkan cusub ee dowladda Mareykanku siisay dowladda KMG Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay eedeymo kala duwan u jeedinayaan ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho, ciidamada dowladda KMG iyo kooxaha ka soo horjeeda dowladda, kuwaasoo lagu eedeynayo inay hub culus ku dhex ridaan shacabka.
Qaar ka mid ah hay’adaha eedeynta u soo jeediyay dhinacyadan ayaa sheegay in ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay hub culus u isticmaalaan goobaha ay degan yihiin dadweynuhu.
Dhinaca kale Midowga Afrika oo eedeynta iska difaacay ayaa sheegay inaysan ciidamadooda wax madaafiic ah ku ridin goobaha ay dadka shacabka degan yihiin, waxayna ku doodeen in ciidamadoodu ay hubsadaan meelaha ay hubka ku ridayaan.
Wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ee ku sugan Muqdisho aysan dadka shacabka hub ka dhex ridin, balse sida uu yiri ay kooxaha ka soo horjeeda shacabka dhexdiisa hubka ka soo dhex tuuraan, kana soo weeraraan.
Hadalkan Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ah mid xaqiiqada aad uga fog, iyadoo dadka Muqdisho ku sugan ay ogyihiin xaqiiqda, wariyeyaashuna ay ka soo weriyaan warar sugan, waxaana lawada ogyahay in ciidamada AMISOM ay duqeeyaan goobaha ay shacabku degan yihiin marka weeraro culus ay kala kulmaan kooxaha hubeysan ee dagaallada kula jira.
War Deg Deg ah: Belaha Digil iyo Mirifle oo mucaaraday Aadan Madoobe
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa kulan ku qaatay 75 mudane oo kasoo jeedo beelaha Digil iyo Mirifle oo ay ku jireen wasiiro kuwaas oo ku baaqay in la doorto gudoon cusub oo baarlamaanka ah.
Xildhibaanadan ayaa kulankooda kadib soo saaray qoraal ay uga dalbadeen Adan Madoobe in uu qirto in waqtiga uu ka dhacay iyaga oo codsaday in baarlamaanka uu magaacbo gudoon cusub.
Wasiirka Dastuurka Madoobe Nuunow Maxamed oo la hadlay saxaafada kulankaasi kadib ayaa sheegay in jiraan fara gelin lagu hayo go,aanada Digil iyo Mirifle.
“Fara gelinta xildhibaanada halaga daayo waxay xaq u leeyihiin xildhibaanada Digil iyo Mirifle, waxaan qireynaa in uu waqtigii ka dhacay Sheekh Adan Madoobe” ayuu yiri Madoobe Nuunow.
Sidoo kale Xildhibaanada Luul Cabdi Adan ayaa ku tilmaantay go,aankan mid walaaltinimo ah oo aanan lagu faquuqeyn Adan Madoobe balse lagu badbaadinayo sharafka beeshooda.
“Adan Madoobe waa walaalkeen, inaga ayuu nala dhashay, waajibkiisi ayuu gudan waayey danta guudna kama shaqeynin marka waa in uu ka dagaa xilka” sidaa waxaa tiri Xildhibaanad Luul Cabdi Adan.
Hadalkaan ayaa kusoo beegmay saacado kadib marki sadexda mas,uul ee ugu sareysa dowlada ay si wada jir ah Muqdisho uga soo saareen Muqdisho war murtiyeed ay ku sheegeen in lagu xaliyey doordii baarlamaanka.
Warar kale ayaa sheegaya: Munaasabad lagu qabtay Masjidka Nasrudiin ee Magaalada Muqdisho islamarkaana ay ka soo qeyb-galeen Amiirka Al-Shabaab Shiekh Mukhtaaq Roobow Al-Mansuur iyo saraakiisha ugu sareysa Xarrakada Mujaahidiinta Al-shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigay ilaa 209 dhalinyaro oo Askari oo sida la sheegay loo soo xirray tababar Militari.
Af-hayeenka Xarrakada Mujaahidiinta Al-shabaab Shiikh Cali Max’uud Raagge (Shiikh Cali Dheere ) ayaa sheegay in wax lagu farxo tahay in maanta tababar loo soo xirro dhalinyarro Soomaaliyeed oo diyaar u ah in ay ka qeyb-qaataan wax uu ugu yaaray howlaha Jihaadka ah ee ka socda dalka Soomaaliya, isaga oo intaa ku darray in Ciidamadan cusub ku biiri doonaan kuwii iyaga ka horeeyay oo sida uu sheegay qeybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya ka wada wax uu ku tilmaamay Jihaadka.
Waxaa uu dhaliilay Shiikh Cali Dheere Waalidiinta Soomaaliyeed oo sida uu sheegay caruurta ku bar baariya Waxbarasho laga leeyahay sida uu hadalka u dhigay danno dhaw, gaar ahaan waxaa uu farta ku fiiqay qurba joogta Soomaalida oo sida uu yiiri Soomaaliya.Idaacadaha uun wax ka dacaayadeeya.
”Maanta waxaa halkan ku dhamaaday erayadii leysla dhaxmari jirray ee ahaa Shabaabku Diinta ma yaqaanaan oo waa rag dhalinyarro ah laakiin waxaan halkan ku aragnaa dhalinyarro wax barta oo waliba si gaar ah loo soo barray Cilmiga Jihaadka ayuu yiri Shiikh Cali Dheere Af-hayeenka Al-shabaab.
Mid ka mid ah dhalinyarradii tababarka loo soo xirray ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay tababarka uu dhameystay waxaana uu kula dardaarmay dhamaan dhalinyarrada ka tirsn Xoogagga Xarrakada Mujaahidiinta Al-shabaab in ay sii laba laabaan dagaallada ka dhanka ah Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Marka la eego tababarka maanta Xarrakada Mujaahidiinta Al-shabaab u soo xirreen dhalinyarrada la sheegay in ay ka qeyb-qaadanayaan Camalka Jihaadka iyo tababarada is daba jooga ah ee loo soo xirro Ciidamo ka tirsan Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ay muujinayaa sida wali xaalku fari ugu qadneyn.
War Deg Deg ah: Dagaal ka socda Guriceel
Abriil 29, 2010
Wararka laga hellayo degmada Guri-ceel ee Goballka Galguud ayaa sheegaya in saakay Waabarigii hore dagaallo u dhaxeeya Xoogagga Ahlu Sunna Waljameeca iyo Xarrkada Mujaahidiinta Al-shabaab ka dhaceen deegaanno hoos taga degmada Guri-ceel ee Goballka Galaduud.
Sida uu HOL u sheegay Wariye jooga Degmada Guri-ceel dagaallka xoogaasi ayaa ka dhacay deegaannka lagu magacaabo Ceel-baxay kadib markii ay halkaa weerar ku soo qaadeen Ciidamo ka tirsan Xarrakada Mujaahidiinta Al-shabaab ilaa haddana lama oga khasaaraha ka dhashay dagaallka saakay la sheegay in uu dhaxmaray labada dhinac, inkastoo Saraakiil u hadashay Xarrakada Mujaahidiinta Al-shabaab sheegeen in ay la wareegeen gacan ku heynta goobihii lagu dagaallamay.
Dagaalka saakay ayaa daba jooga dagaalo maalmihii ugu danbeeyay dhinacyada isaga soo horjeeda
Goballada Bartamaha Soomaaliya ee Al-shabaab iyo Ahlu Sunna ku dhaxmrayay deegaanno badan oo ka tirsan Goballka Galgaduud oo ka mid ah goobaha ay ku xooga badan yihiin Culima’udiinka Ahlu Sunna Waljmeeca.
Waxaana xusid mudan in dagaallkan u danbeeyay ee ka dhacay Goballka Galgaduud qeyb ka yahay doonista Xarrakada Al-shabaab ee ah in ay la wareegeen gacan ku heynta deegaannada ay Maamulaan Culima’udiinka Ahlu Sunna Waljameeca iyaga oo horay ula wareegay deegaannada Masago-waay, Galcad, iyo Ceel-dheer oo ka tirsan Goballka Galgaduud.
Saraakill ka tirsan Xarakada Al Shabaab oo saxaafada la hadashay ayaa sheegay in ay la wareegeen gacan ku heeynta deegaanka Ceelbaxay ee maanta daagaalka ay kula galeen ciidmada Ahlu Suna Waljamaaca.
War Deg Deg ah: Xildhibaanno kulan ku yeeshay Muqdisho oo sheegay inuusan jirin wax xal ah oo laga gaaray khilaafkii u dhexeeyay Baarlamaanka iyo Ciidamo ka baxsadey Dowlada
Abriil 28, 2010
Xildhibaanno maanta shir ku yeeshay Muqdisho ayaa kasoo horjeestay hadalkii shalay kasoo baxay Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee ahaa in xal laga gaaray khilaafkii Baarlamaanka ka dhex taagnaa.
Mudane Cumar Islow Maxamed oo shir jaraa’id qabtay kaddib kulan ay yeesheen 300-Xildhibaan oo kasoo horjeeda guddoonka Baarlamaaka ayaa sheegay inaysan jirin wax xal ah oo laga gaaray khilaafkii baarlamaanka.
“Khilaafkii baarlamaanka Soomaaliya weli waa jiraa mana jirto wax xal ah oo laga gaaray, xalka laga gaari karana waa in sharciga u yaalla baarlamaanka lagu xalliyo khilaafka taagan” ayuu yiri Xildhibaan Cumar Islow.
Xildhibaanku wuxuu sheegay in go’aankooda aysan ka laabanayn, isla markaana aysan ku raacsanayn Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif hadalkii uu shalay ku sheegay in laga gaaray xal khilaafkii u dhexeeyay Baarlamaanka.
Dhanka kale, Mudanayaashan ayaa waxay cambaareyn u soo jeediyeen Ergayga gaarka ee Xoghayaha guud ee Qarammada Midoobay uga wakiilka ah Soomaaliya Axmed Walad Cabadalla iyagoo sheegay inuu doonayo inay burburto Dowladda.
“Hadalkii kasoo baxay Axmed Walad Cabdalla ee ahaa in khilaafka Baarlamaanka uu yahay mid macno-darro ah waxaan u aragnaa inuu yahay mid uu ku doonayo inuu ku burburiyo Dowladda Somalia si shir kale oo dib u heshiisiin ah loo qabto” ayuu yiri Xildhibaan Cumar Islow.
Xildhibaannadan ayaa shirkooda wuxuu imaanayaa iyadoo shalay Madaxweyne Sheekh Shariif uu sheegay in la dhameeyay khilaafkii u dhexeeyay xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya, lana furayo kulammada baarlamaanka iyadoo la mideysan yahay.
Warar kale ayaa sheegaya in Wakaalada wararka ee AP ayaa war ay qortay ku sheegtay in boqolaal askar Soomaaliyeed oo tababarkooda lagu bixiyay malaayiin dollar oo ay bixiyeen dalalka Reer Galbeedka, inay ka baxsadeen ciidanka taasoo sabab looga dhigay ka dib markii ay waayeen mushaharka bishii la siiyo oo gaaraya $100 bishiiba.
Qaar ka tirsan askartaasi waxaa la sheegay inayba ku biireen kooxaha lala xiriirinayo al-Qaacida ee dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya.
Dowladda Maraykank ayaa bixisay kharash garaya $6.8 Milyan oo dollar oo lagu bixinayo barnaamijyo lagu tababarayo ilaa 1000 askari oo sanadkii la soo dhaafay lagu tababaray dalka Djibouti iyo 1,100 askari oo iyaguna sanadkii la soo dhaafay lagu tababaray dalka Uganda.
Horraantii sanadkan waaxda arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka iyo diblomaasiyiin reer Galbeed ahi waxay sheegeen in qorshuhu uu ahaa in askarigiiba la siiyo $100 bishiiba. Laakiin Korneyl ka tirsan ciidamada miligariga oo lagu magacaabo Axmed Aaden Dhayow oo ka soo jeeda Digil & Mirifle ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in kalabar ciidamadaasi ay mushahar la’aan darteed askarnimada uga baxsadeen, iyagoo u kala qeybsamay kuwo ku biiray al-Shabaab iyo kuwa isaga fariistay askarinimada.
Balse saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa been iyo brobogaando ku tilmaamay inay ka baxseen ciidamo ka tirsan ciidankii dhawaan lagu soo tababaray Djibouti.
Ciidankan dibadda lagu soo tababaray ee la sheegay inay ka baxsadeen xeryaha dowladda waxaa lagu qiyaasay kala bar, tiradaasoo ah tiro aad u ballaaran.
Inkastoo taliyaha ciidamada dhulka ee dowladda KMG ah uu beeniyay warkan baxsashada ciidanka, haddana wasiiru dowlaha amniga ee dowlada Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacadde ayaa qiray in ay jiraan ciidamo ku biiray mucaaradka dowladda, balse wuxuu ka gaabsaday inuu sheego tiro ahaan inta ay la eg yihiin, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP.
Beesha caalamka ayaad mooddaa inay dhankeedana ku fashilantay inay hubiso in mushaar joogto ah loo helo ciidanka DKMG ah, si looga waabto inay baxsadaan ama ku biiraan kooxaha dowladda kasoo horjeeda.
XAFLAD XIL WAREEJIN IYO CALEEMO SAAR EE JAALIYADDA DIGIL IYO MIRIFLE OO KA DHACDEY MAGAALADA BIRMINGHAM EE WADANKA UK
Waxa xalay o ay taarikhdu ahayd 03/04 10 ka dhacday magaalad Birmingham ee wadanka UK xaflad si heer sare ah loo soo agaasimey oo in muda ahba la sugayay oo ay ka qayb galeen dhamaan aqoonyahanada, waxgaradka, culimaa’udiinka, malaaqyada, suldaamnda iyo hooyinka ku abtirsada jaaliyada digil iyo mirifle xafladaas oy ay isugu jirtey xil wareejin iyo caleema saar maamul cusub uu yeelanayo jaaliyada digil iyo mirifle ee UK iyo dardar gelintii maamul gobeeldi lixda gobol ee SOUTH WEST SOMALIA.
Xaflaadaas oo ay daba socotey shirar tira badan oo mudooyinka dambe ka socday wadanjkan UK kaas oo jaaliyada ku raadinaysey sidiid wax loga qaban lahaa dhibaatooyinka daba dheraaday ee ka jira wadanka soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa xal waara oo nabad ku salaysan.
Magaalada Birmingham oo ah caasimada labaad ee wadanka UK oo ay jaaliyada u arkeen in ay tahay mid ayada ku taala bartmaha UK ayaa ayada waxay nasiib u yeelalatay in labadii shir ugdambeeyay uu kadhaco ayadoo ay doorashadii gudoomiyaha lagu doorteyna ay marti gelisey, ayna aheyd maalin Sabti ah taariikhduna ay aheyd 06/03/2010.
Sida la wada ogsoon yahayna waxaa hore u jirey Maamul ay laheyd Qowmiyadda DigilMirifle ee UK, kaasoo uu ahaa mid waqtigiisii xil hayna ay ka dhamaatey, hawlo fara badan oo la taaban karana uu soo qabtey, waxaana gudoomiye ka ahaa maamulkii hore Mudane Cabdullaahi Siidow, runtii intii uu xilka hayeyna howlo fara badan u soo qabtey Qowmiyadiisa.
Doorashadii dhacdey 06/03/2010 waxaa isugu soo baxey laba mudane oo la kala yiraahdo, Ing: Sayedali Mohamed iyo Dr: Abdilatiif Abuukar Qaasim, waxaana guuleystey Ing: Sayid-ali Mohamed, uuna ku guuleystey 8 Cod, halka Cabdilatifna uu heley 7 Cod, Sida lagu heshiiyeyna ay aheyd in gudiga dhexe oo 15 qof ah ay iska dhex doortaan gudoomiye, waxaana nasiib u yeeshey Ing: Sayid-ali.
Sidoo kale maanta waxaa kaloo isla xafladan lagu caleemo saarey Gudoomiyaha gollaha sare Col: Madey Nuurey “Ufurow”, Suldaanka Qowmiyadda DigilMirifle UK Suldaan Cusmaan , iyo General Secretry of SouthWest Soomaaliya, Ing Aliyow
Suldaan Cusmaan ayaa waxaa la isla gartey in uu noqdo qofka ugu sareeya Qowmiyadda Digil & mirifle inta ku nool UK, hadii khilaaf ka dhex dhaco gudiyada asaga ayaa ah qofkii kala xukmin lahaa oo go’aana ka gaari lahaa.
Muqdisho: Khilaaf soo kala dhexgalay Shariif Xasan Sheekh Aaden iyo Shariif Sheekh Axmed
Dawladda KMG ah oo maamusho 2 KM oo kamid ah caasumada dalka Soomaaliya, ayaa hada dhex taagan Badweyn khilaaf ah oo ay adag tahay sida lugu xaliyo, marka laga tago Is jiidjiidka Siyaasadeed ee ka aloosan guryaha iyo Hotelada magaalada Muqdisho.
Khilaafkii ugu dambeeyey ayaa udhaxeeyay baarlamaanka KMG ah iyo Gudoomiyahooda oo ay sheegeen in uu ka dhamaaday waqtigii sharciga ahaa, looga baahan yahay qabashada doorasho cusub oo ay ka qeybgalaan mudanayasha baarlamaanka Soomaaliya, laakiin taasi waxaa diiday Aaden Madoobe.
Khilaaf hor leh oo cusub ayay ogaatay APL in uu ka dhex curtay Madaxweynaha KMG ah iyo Wasiirka Maaliyada oo ay mudo dheer ahaayeen saaxiibo aan kala harin, xataa marka la aadayo Safarada dibada ah, waxaana hada laga dareemay khilaafkaas gudaha Aqalka madaxtooyada.
Shariif ayaa ugudbiyey Shariif Xasan Sheekh Aaden in looga baahan yahay soo xirida Miisaaniyada dawladda KMG ah ee Soomaaliya iyo arrimo kale oo udhaxeeya labadan masuul,balse Shariif Xasan ayaa ka dhago adaygay fariinta uga timid Shariif Sheekh Axmed.
Wasiirka Maaliyada oo lakulmay Madaxweynaha kMG ah ayaa ubandhigay qorshaha Siyaasadeed & Miisaaniyada,wuxuuna iska difaacay eedaha uga imaanayay baarlamaanka KMG ah oo ahaa in uu lunsaday lacago badan, isagoo shegay in aysan waxba ka jirin arrimahaasi, laakiin Madaxweynaha KMG ah ayaa ku adkeeyey Wasiirka Maaliyada in uu keeno Xisaab xir qoran.
Shariif Xasan oo larumeysan yahay in uu saldhig wanaagsan uyahay mooshinka looga soo horjeedo Aaden Madoobe, ayaa diiday dhamaanba fariimihii uga yimid Madaxweynaha KMG ah, taasoo keentay in ay labada masuul oo horay saaxiibo isku dhaw uahaa ay ku kala tagaan arrimaha Siyaasadeed ee dawladda KMG ah.
Shariif Xasan oo sannadkii 2004-tii loo dhiibay gudoomiye-nimada baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii uu khilaaf adag soo kala dhexgalay isaga iyo Madaxweynihii dawladdii waqtigaas, waxaa uu sababay in shaqada laga qaado isagoo dibad joog ah, markaasna lajoogay Shariif-ka ay maanta is hayaan, waxaana ragii waqtigaas ole-olaha dheer ugalay in shaqada laga qaado kamid ah Aaden Madobe oo ay maanta heysato mid la mid ahtii Shariif Xasan.
Wasiirka Maaliyada ayaa lasheegay in uu bixiyay lacag badan oo ku aadan sidii Afhayeenimada baarlamaanka looga qaadi lahaa Aaden Madoobe,isagoo doonaya in uu ka aarsado rag badan oo ay waqtigaas Siyaasada si xun iskugu qabteen.
Saxiixidii heshiiskii magaalada Addis Ababa ee kooxda Ahlu Suna ayaa sidoo kale la xaqiijiyey in ay isku khilaafeen labada masuul, iyadoo uu Shariif ka cago jiiday hirgalinta heshiiskaas,ayaa hadana Shariif Xasan oo ahaa budhigihii heshiiska ee dhinaca dawladda KMG ah uu dhawaan codsaday in lahirgaliyo oo jagooyin lasiiyo kooxda, uu la saxiixay heshiiska, balse ma aysan suuragalin, markii uu yimid Khilaafka dawladda KMG ah.
Lama garan karo waxa lugu xalin doono khilaafka adag ee udhaxeeya Madaxweynaha KMG ah iyo Wasiirka Maaliyada oo ay mudo dheer ahaayeen saaxiibo aan kala harin, waxaana adag in la xaliyo, madaama qodobada ay hada kala heystaan dhinacyadu ay adag yihiin.
War Deg Deg ah: Sarkaal Kobokude oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa odayaasha wacaysle isug yeeray in galacad iska soo xadiriyaan
war hada na soo gaarey ayaa sheegay in odayaasha wacaysle ee ku harey degmooyinka galcad iyo mesagawaa ceeldheere ay iska soo xaadiriyaan kulan maanta laga iclaamiyey degmada galcad si la isku cafiyo. shuruuda ku xiran is cafiska ayaa ah in ay u hogaansamaan odayaashu xukunka alshabaab maadaama laga itaal roonaadey waxaa ka mid ah shuruuda in la faago qabriyada culimad caanka ah ee la siyaarto. waxaase xaqiiqo ah in odayaasha wacaysle badankoodu howdka ku jiraan oo aysan weli is dhiibin qaar fara ku tiris ah mooye.
Sh.Aden Madoobe oo talooyin loo jeedshay diiday
Kulan dhawaantan dhexmaray wasiirka diinta iyo awqaafta ee Jabuuti Md.Xaamud iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Sh. Aden Madoobe oo ka dhacay xarunta Madaxtooyada ayaa looga hadlayay xalinta qilaafka weyn ee xildhibaanada qaar iyo gudoomiyaha Baarlamaanka soo kala dhexgalay.
Kulanka ayaa markale Gudoomiye Aaden Madoobe loogu soo jeedshay in uu aqbalo ka dagista xilka gudoomiyenimo ee Baarlamaanka isagoo markaasna kala dooranaya sadex qodob oo kala ah sida soo socota:
1) in uu qaato xilka wasaaradweyn oo golaha wasiirada ah iyo Ra’iisulwasaare ku xigeen
2) in gudoomiye nimadii Baarlamaankana la siinayo nin ka soo jeeda beesha Sagaal
3) iyo in loo balan qaadayo in uu san xilkan isusoo sharixi doonin Shariif Xasan.
Qodobadan ayaa uu gudoomiye Sheekh Aden ku tilmaamay kuwa lagu qoslo sida aanu ku helnay ilowareedyo gudoomiyaha ku agdhow, waxaana uu si cadaana uu ugu sheegay Jabuutiyaanka in xilalalkan uusan isaga diyaar u aheyn, sidoo kalena waxaa uu sheegay in digil iyo mirifle ay haatan leeyihiin Ra’iisulwasaare ku xigeen balse aanan midkale xaq u laheyn.
Xaaladahan ayaa hadaba cirka isku sii shareeraya iyadoo cabsi weyna laga qabo in baarlamaanku uu laba o ukala qeybsamo iyadoo ay kukala shaqeyn doonaan laba gudoomiye baarlamaan taas oo keeni doonta in waxbadan leyska weydiiyo jiritaanka dowladda oo dhan.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Abriil, 2010.